Kushone abantu abangu-8 ngesikhathi kunyathelana ekhonsathini ye-hip-hop e-Houston
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Kushone abantu abangu-8 ngesikhathi kunyathelana ekhonsathini ye-hip-hop e-Houston
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Health News • Umculo • Izindaba • Abantu • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Kushone abantu abangu-8 ngesikhathi kunyathelana ekhonsathini ye-hip-hop e-Houston.
Izinkinga zokuphepha bezikhathaza ngisho ungakaqali umcimbi. Abezindaba bendawo babike ukuthi abantu abaningi banyathelwe ngezinyawo ngemuva kokuthi amakhulu egasele e-NRG Stadium, ehlehlisa izithiyo zezokuphepha, agqekeza umngcele ngaphambi kokuthi kuqale ikhonsathi adiliza imitshina yensimbi.
Abantu abaningi banyathelwe ngezinyawo ngemuva kokuthi amakhulu egasele eNRG Stadium, ehlehlisa imigoqo yezokuphepha.
Abezimo eziphuthumayo babizwe ngemuva kokulimala kaningi ngobusuku bokuvulwa kwe-Astroworld Music Festival.
Abantu abaningi baphuthunyiswe esibhedlela esisendaweni yaseHouston, eTexas ngemuva kokulimala.
Kubizwe ama-ambulensi, izicishamlilo nezinye izinsizakalo eziphuthumayo ngemuva kokulimala okuningi ngobusuku bokuvulwa kwefestiveli yomculo we-hip-hop edayisiwe e-Houston, eTexas.
Ngokusho kwezikhulu zoMnyango wezeMlilo eHouston, kushone abantu abayisishiyagalombili kwalimala abanye abaningi esibhicongweni I-Astroworld Music Festival.
"Sinezingu-23 ezishonile okuqinisekisiwe ukuthi zishonile," kusho isikhulu sezomlilo eHouston uSamuel Pena etshela izintatheli, wengeza ngokuthi sebebonke, bangu-XNUMX abantu abathuthwe besuka endaweni yesigameko.
“Isixuku saqala ukumpintshana sibheke phambili esiteji, abantu baqala bethuka,” kuchaza iNduna.
Ividiyo ezinkundleni zokuxhumana ikhombisa abezimo eziphuthumayo benza i-CPR kubantu abambalwa abalele phansi ngaphandle kwesiteji, njengoba umculo onomsindo uqhubeka udlala ngemuva.
Enye i-video ikhombisa iqeqebana labalandeli lizama ukungena ngokugibela uthango.
Kuphinde kwavela imibiko yokuthi abanye abebehambele ekhonsathini abebengahlelekile baboshwe ngamaphoyisa emnyango.
Amathikithi e-Astroworld Music Festival angu-100,000 athengiswe aphela lingakapheli ihora edayiswe ngoMeyi. Babalelwa ku-50,000 abalandeli abebehambele lo mcimbi wezinsuku ezimbili.
Uhlu lwale festiveli luhlanganisa izihlabani ze-hip hop uTravis Scott, Young Thug, Lil Baby, SZA, kanye nokuvela okungalindelekile kukaDrake, phakathi kwabanye.